မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒိုများများ ရောင်းရန် | ShweProperty.com
Home Loan ဖြင့်ဝယ်ယူရန် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ရန်
Sort by: ဘဏ်ရွေးချယ်ရန်
Sort by: ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Get Propertyies in Myanmar By Email
ပုံစံတူ အိမ်ခြံမြေများ email ရယူရန်
ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် 12 ရပ်ကွက် သုမင်္ဂလာလမ်းရှိ အသင့်တင့်ပြင်ဆင်ပြီး…
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် 12 ရပ်ကွက် သုမင်္ဂလာလမ်းရှိ အသင့်တင့်ပြင်ဆင်ပြီး မီနီကွန်ဒိုခန်း ရောင်းမည်။ Size - 1026 Sqft / ( 8 - Floor ) မာစတာအိပ်ခန်း…...
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် 12 ရပ်ကွက် သုမင်္ဂလာလမ်းရှိ အသင့်တင့်ပြင်ဆင်ပြီး မီနီကွန်ဒိုခန်း ရောင်းမည်။ Size - 1026 Sqft / ( 8 - Floor ) မာစတာအိပ်ခန်း…
Advertiser : Soe Moe
Property ID: S-1198265
Mobile : 09426767567
Office no : 09252922207 / 09779933549
ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းမရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး…
ပေအကျယ် - 30x 50 ' / MBR - 1 ခန်း / SBR -2 ခန်း / AC -4လုံး / တအိမ်လုံးအဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး / တိုက်သစ် / ထောင့်တိုက် / ပရိဘောဂပစ္စည်းအပြည့်စုံပါ…...
ပေအကျယ် - 30x 50 ' / MBR - 1 ခန်း / SBR -2 ခန်း / AC -4လုံး / တအိမ်လုံးအဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး / တိုက်သစ် / ထောင့်တိုက် / ပရိဘောဂပစ္စည်းအပြည့်စုံပါ…
Listed 18 June 2019
Property ID: S-1200974
Asking Price : 2,800 သိန်း
ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းအနီး 52 လမ်းရှိ…
ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းမအနီး 52 လမ်းရှိ အသင့်နေပြင်ဆင်ပြီး မီနီကွန်ဒိုအခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။…...
ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ် ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းမအနီး 52 လမ်းရှိ အသင့်နေပြင်ဆင်ပြီး မီနီကွန်ဒိုအခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။…
Listed 8 June 2019
Property ID: S-1198940
ရောင်းရန် - ကမာကြည်မီးပွိုင့်အနီး သံသုမာလမ်းမပေါ်ရှိဈေးတန်မီနီcondoတိုက်ခန်းအမြန်ရောင်းရန်
ကြွေခင်း,ဂျိုးဖြုရေ,RC ခင်း,Master Bedroom,Overhead Tank,Own Meter,Generator,အဝီစီတွင်း,Pile…...
ကြွေခင်း,ဂျိုးဖြုရေ,RC ခင်း,Master Bedroom,Overhead Tank,Own Meter,Generator,အဝီစီတွင်း,Pile…
Listed 26 January 2019
Advertiser : Aung Zaw
Property ID: S-1184939
Office no : 0943081500, 09795300860, 09425022896, 09259256367
ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် အမှတ် (၂၄၉)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ပါရမီလမ်းတွင်…
အမှတ်(၂၉၄)၊ (၄)ရပ်ကွက် ၊ပါရမီလမ်း ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ကဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်မယ့် ရောင်းရန်ရှိ…...
အမှတ်(၂၉၄)၊ (၄)ရပ်ကွက် ၊ပါရမီလမ်း ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ကဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်မယ့် ရောင်းရန်ရှိ…
Listed 18 January 2019
Win Min Tun
Advertiser : Win Min Tun
Property ID: S-1184826
Office no : 095077551
ရောင်းရန် - ရုံးခန်းပဲဖွင့်ဖွင့် လူနေထိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေမယ့်…
မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မီနီကွန်ဒိုကတော့ အချက်အချာကျပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်တဲ့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမကြီးအနီး အမှတ်(၃၉၅)၊ ဝါယာလက်(၃)လမ်း၊…...
မီနီကွန်ဒိုကတော့ အချက်အချာကျပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်တဲ့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမကြီးအနီး အမှတ်(၃၉၅)၊ ဝါယာလက်(၃)လမ်း၊…
Shw Moe Htut Construction
Advertiser : Shw Moe Htut Construction
Property ID: S-1181106
Office no : 09761496838, 09975101910
ရောင်းရန် - ဗိုလ်​တ​ထောင်​မြိုနယ်(​ 44 ) လမ်းရှိ အသင့်​​နေပြင်​ဆင်​ပြီး…
ဗိုလ်​တ​ထောင်​မြို့နယ်​ 44 လမ်းရှိ အသင့်​​နေ3လွှာ Mini Condo အခန်း​ရောင်းရန်​ရှိပါသည်​။ ​ပေအကျ ယ်​ (13.5 x 50 )' Bedroom - 1 Aircon တပ်​…...
ဗိုလ်​တ​ထောင်​မြို့နယ်​ 44 လမ်းရှိ အသင့်​​နေ3လွှာ Mini Condo အခန်း​ရောင်းရန်​ရှိပါသည်​။ ​ပေအကျ ယ်​ (13.5 x 50 )' Bedroom - 1 Aircon တပ်​…
Listed 17 November 2018
​ 44 လမ်း
Property ID: S-1176632
ရောင်းရန် - ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် အမှတ်(၂၁၁)၊ ၃၂လမ်း အထက်ဘလောက် Sule…
ပန်းပဲတန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ထမင်းစား၊ ဧည့်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ကြွေပြားကပ်၊ ရေပူရေအေး၊ Lift ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ Dining Table ၊ Flat Tv ၊ ဈေးနှုန်းလေးသိချင်ပါက…...
ထမင်းစား၊ ဧည့်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ကြွေပြားကပ်၊ ရေပူရေအေး၊ Lift ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ Dining Table ၊ Flat Tv ၊ ဈေးနှုန်းလေးသိချင်ပါက…
Listed 21 September 2018
Property ID: S-1176909
ရောင်းရန် - တာမွေမြို့နယ် အမှတ်(၂၄) အသောကလမ်းတွင် မိသားစုတွေအတွက်…
အဆောက်အဦး အင်္ဂါရပ် ---------------------------- ရှစ်ယောက်စီး ဓါတ်လှေကားသစ်။ ဓါတ်လှေကားအတွက် မီးစက်အသစ်။ ဓါတ်လှေကားအတွက် ငွေပဒေသာပင်သိန်း…...
အဆောက်အဦး အင်္ဂါရပ် ---------------------------- ရှစ်ယောက်စီး ဓါတ်လှေကားသစ်။ ဓါတ်လှေကားအတွက် မီးစက်အသစ်။ ဓါတ်လှေကားအတွက် ငွေပဒေသာပင်သိန်း…
Listed3September 2018
Property ID: S-1174272
ရောင်းရန် - အလုံမြို့နယ် သိပ္ပံလမ်းတွင် မိသားစုတွေအတွက် ဆိတ်ငြိမ်စွာ…
အဆောက်အဦး အင်္ဂါရပ် ---------------------------- ရှစ်ယောက်စီး ဓါတ်လှေကားသစ်။ ဓါတ်လှေကားအတွက် မီးစက်အသစ်။ ဓါတ်လှေကားအတွက် ငွေပဒေသာပင်သိန်း…...
အဆောက်အဦး အင်္ဂါရပ် ---------------------------- ရှစ်ယောက်စီး ဓါတ်လှေကားသစ်။ ဓါတ်လှေကားအတွက် မီးစက်အသစ်။ ဓါတ်လှေကားအတွက် ငွေပဒေသာပင်သိန်း…
Property ID: S-1174249
ရောင်းရန် - Condo အမြန်ရောင်းရန်ရှိသည်။
#ဈေးအသင့်အတင်Mini Condoအမြန်ရောင်းရန်ရှိသည် -10ထပ်တိုက် -အလွှာနိမ့် -ဓာတ်လှေကား ၂ စင်း -1450 sqft -1 Master Bedroom -1 Single Bedroom -Kitchen -Dining room -Aircon -Fully…...
#ဈေးအသင့်အတင်Mini Condoအမြန်ရောင်းရန်ရှိသည် -10ထပ်တိုက် -အလွှာနိမ့် -ဓာတ်လှေကား ၂ စင်း -1450 sqft -1 Master Bedroom -1 Single Bedroom -Kitchen -Dining room -Aircon -Fully…
Listed 21 July 2019
Good Service Real Estate
ဖုန်းဆက်ရန် 09 774 588577
09 774 588577
Advertiser : Good Service Real Estate
Property ID: S-1202998
Mobile : 09 774 588577,
Office no : 09 260 996995
ရောင်းရန် - 5-Ward (၅ရပ်ကွက်)
*Location – 5-Ward , South Oakklapa Town ship. *Price – 800 Lakhs *Property Type — Condo ( Lift ) *Area — 1026 sqft *Rooms formation — 2-Bedrooms , 1-Aircon , Living room and Kitchen. *Other Features — Parquet , 1-Bathroom and ready to live located at South Oakklapa Town ship....
*Location – 5-Ward , South Oakklapa Town ship. *Price – 800 Lakhs *Property Type — Condo ( Lift ) *Area — 1026 sqft *Rooms formation — 2-Bedrooms , 1-Aircon , Living room and Kitchen. *Other Features — Parquet , 1-Bathroom and ready to live located at South Oakklapa Town ship.
Listed 20 July 2019
Advertiser : Htet Aung Shine Real…
Property ID: S-1203116
ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ အင်းဝလမ်းမပေါ်ရှိ မီနီကွန်ဒိုအရောင်း…
ဆက်သွယ်ရန် 09952555903,09952555905,09952555910,09952555928 ...
Listed 18 July 2019
Advertiser : Zar Zar Win
Property ID: S-1199146
Mobile : 09443366041
Property ID: S-1199145
Property ID: S-1199143
Property ID: S-1199142
Property ID: S-1199140
Room Type/MBR-1, BR-1 #Pile Foundation #New Elevator (SIGMA Elevator New Series) #Power Line/ Lighting Line #U-PVC Windows #Own Meter/ Owne Motor # Fire Safey Systems #24 Hour Electricity with sound proof # Generator #Undergound Tank / Over head Tank #Kitchen Counter/ ဂရင်းနိူက်နှင့်…...
Room Type/MBR-1, BR-1 #Pile Foundation #New Elevator (SIGMA Elevator New Series) #Power Line/ Lighting Line #U-PVC Windows #Own Meter/ Owne Motor # Fire Safey Systems #24 Hour Electricity with sound proof # Generator #Undergound Tank / Over head Tank #Kitchen Counter/ ဂရင်းနိူက်နှင့်…
Property ID: S-1199139
ဆက်သွယ်ရန် 09952555903,09952555905,09952555910,09952555928 Room Type/MBR-1, BR-1 #Pile Foundation #New Elevator (SIGMA Elevator New Series) #Power Line/ Lighting Line #U-PVC Windows #Own Meter/ Owne Motor # Fire Safey Systems #24 Hour Electricity with sound proof # Generator #Undergound…...
ဆက်သွယ်ရန် 09952555903,09952555905,09952555910,09952555928 Room Type/MBR-1, BR-1 #Pile Foundation #New Elevator (SIGMA Elevator New Series) #Power Line/ Lighting Line #U-PVC Windows #Own Meter/ Owne Motor # Fire Safey Systems #24 Hour Electricity with sound proof # Generator #Undergound…
Property ID: S-1199138
Property ID: S-1199137
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန်မီနီကွန်ဒို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
အလုံ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ဗဟန်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ဗိုလ်တထောင် ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ကိုကိုးကျွန်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ဒဂုံ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ဒလ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ဒေါပုံ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို
လှိုင် ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို လှိုင်သာယာ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို လှည်းကူး ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို မှော်ဘီ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ထန်းတပင် ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို အင်းစိန် ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ကမာရွတ် ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ကော့မှုး ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ခရမ်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ကွမ်းခြံကုန်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ကျောက်တံတား ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ကျောက်တန်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို
ကြည့်မြင်တိုင် ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို လမ်းမတော် ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို လသာ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို မရမ်းကုန်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို မင်္ဂလာဒုံ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို မြောက်ဥက္ကလာ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ပန်းပဲတန်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ပုဇွန်တောင် ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို စမ်းချောင်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ဆိပ်ကမ်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို
ရွှေပြည်သာ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို တောင်ဥက္ကလာ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို တိုက်ကြီး ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို တာမွေ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို သာကေတ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို သံလျင် ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို သင်္ဃန်းကျွန်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို သုံးခွ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို တွံတေး ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ရန်ကင်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို ရွှေပေါက်ကံ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
အိမ်ခြံမြေများကို Email ရယူရန်
မကြာခင် လူကြီးမင်း၏ Email settings ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်
Shwe Property ရဲ့ စည်းကမ်းချက်များ ကို လိုက်နာပါက submitကိုနှိပ်ပါ
minicondo, for sale in all townships, Yangon